‘हामी संसदीय व्यवस्था मान्दैनौँ, यसविरुद्ध लड्छौँ’– ‘विप्लव’ – www.janabato.com
‘हामी संसदीय व्यवस्था मान्दैनौँ, यसविरुद्ध लड्छौँ’– ‘विप्लव’
१४ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०७:१५ November 14, 2017 Janabato Online
(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ जनयुद्धका दिनहरूमा प्रचण्डको निकै प्रशंसा गर्नेमध्येका एक हुन् । तर उनै विप्लव आज प्रचण्डका खरो आलोचक भएका छन् । जनयुद्ध सुरु गर्ने दिनहरूमा गरिएको अठोटलाई प्रचण्डले बीच बाटोमै छोडेको भन्दै त्यो अधुरो क्रान्तिलाई आफ्नो पार्टीले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा मार्फत पूर्णता दिने बताइरहेका छन् । राज्यको प्रमुख सुरक्षा निकायले उनको पार्टीलाई मुख्य सुरक्षा चुनौती भन्दै उनका पार्टीका विभिन्न गतिविधिमा रोक लगाइरहेको सन्दर्भमा लेखक युग पाठकले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।)
क्रान्तिको घनत्व र त्यसको आवश्यकतालाई मापन गर्ने भनेको सामाजिक, राजनीतिक र राज्यको संरचनामा हो । राज्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अङ्गहरू हेर्नुभयो भने परिवर्तन नै भएन भन्ने त होइन । केही परिवर्तन अवश्य भयो तर त्यो पूर्ण भएन । न त सामाजिक रूपान्तरणले, न त सबै उत्पीडित वर्ग समुदायले गुणात्मक ढङ्गले परिवर्तनको महसुस गर्न पाए । समाज र राज्यको संरचना हेर्नुभयो भने स्पष्ट के देखिन्छ भने ६०–७० वर्ष पहिलेको संरचनामा अहिले पनि गुणात्मक परिवर्तन भएकै छैन । यो सबैले मानेको कुरा हो । त्यसपछि कानुन, अर्थतन्त्र अथवा सुरक्षा प्रणाली हेर्नुभयो भने पनि कतै कुनै परिवर्तन भएको छैन । यसले के देखाउँछ भने यो असफल आन्दोलन हो र यसले पूर्णता खोजेको छ । त्यही अपूर्णतालाई पूर्णता दिन क्रान्ति आवश्यक छ ।
अघि मैले भने नि, एक तहसम्म त आयो । तर क्रान्तिको दृष्टिकोणबाट यो परिवर्तन अन्तिम क्रान्ति होइन । सुधार पक्कै हो । सुधारत स्वतः पनि हुन्छ । तर जनयुद्धको नेतृत्व गरेको पार्टी र आन्दोलनका हिसाबले यो त्यसको पूर्णताको क्रान्ति होइन । क्रान्तिको अपूर्णताले गर्दा राज्यको अङ्गमा आंशिक परिवर्तन त भए, तर त्यसले आमूल परिवर्तन पाएन । जसले गर्दा नेपाली समाज फेरि पछाडि फर्केको छ र एउटा खाले अन्तरविरोध, अराजकता, असन्तुष्टिमा रुमल्लिएको छ । जनयुद्धको प्रस्तानविन्दु, प्रवेश र विकासको चरणसँग यसको सम्बन्ध छैन ।
शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा यो कुरा तपाईंहरूलाई थाहा थिएन ?
हामीलाई थाहा थियो । थाहा भएरै लेखेर, छलफल, बहस गरेर यो–यो समस्या आउँछ र त्यसलाई यसरी हल गर्ने भनेर टुङ्गो लगाएर हामी आएका हौँ । त्यसबेलाको चुनुवाङ बैठक भन्ने सायद तपाईंहरूलाई थाहा छ । प्रचण्डजीले पेश गरेको दस्तावेज अझै पनि हामीसँग छ । हामीले त्यति नै बेला यसका सकारात्मक–नकारात्मक कुराको विश्लेषण गरेर अगाडि बढेका हौँ । हामीले त्यहाँ गणतन्त्रसम्म काङ्ग्रेस–एमालेसँग जाने र जनयुद्धको समापन चाहिँ राज्यसत्तालाई परिवर्तन गर्ने ठाउँमा पुगेर मात्र हुन्छ भनेर स्पष्ट थियौँ । त्यसपछि मात्र नेपालमा स्थिरखालको राज्य निर्माण हुन्छ भनेका थियौँ । त्यो वर्ग, विचार र संरचनाको दृष्टिकोणबाट नौलो जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुगेर मात्र पुँजीवाद र संसदीय व्यवस्था अन्त्य हुन्छ भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा थियो । ०४७ देखि ०५२ सालसम्मको हाम्रो बहसले जन्माएको सारतत्व भनेकै नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद हो । तर प्रचण्डजी, बाबुरामजी फर्किनुभयो ।
प्रचण्ड, बाबुरामले यो कुरा नबुझेर यहाँ आइपुग्नु भएको हो त ? तपाईंको भनाईमा त उहाँहरूमा ठूलो विचलन देखियो होइन ?
एकजना नेताको हातमा सबै शक्ति केन्द्रित गरेपछि त्यो नेताले चाहेको दिन सिङ्गै पार्टीलाई विचलनमा लैजान सक्ने रहेछ होइन त ? यो बारेमा किन पहिलै विचार गरिएन ?
निकै महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो । के कुरा साँचो हो भने प्रचण्डप्रति मेरो मोह थियो । जनयुद्धका दिनहरूमा भावनात्मक र विचारधारात्मक कोणबाट प्रचण्ड बन्न नचाहने को मान्छे थियो र ? प्रचण्ड भन्ने मान्छेको छविलाई तपाईंले एकैछिन हटाउनुभयो भने त्यो नाम भनेको आन्दोलन र सङ्घर्षको उत्कर्ष हो । माओलाई हामी आफैले देखेको होइन । सँगै बसेर फोटो खिचेको पनि होइन । तर माओको योगदानबाट लाखौँ–करोडौँ मानिसहरू प्रेरित भए । कयौँ यस्ता गुमनाम माओहरू पनि जो माओ बन्न चाहँदा चाहँदै इतिहासको पानामा पटोक्षेप भए । माक्र्स, लेनिनलाई हामी आफैले भेटेको होइन । भन्नुको अर्थ एउटा आदर्शले कुनै न कुनै रूपले छोएको हुन्छ । तर आज प्रचण्ड बन्ने मोह छैन ।
यसमा हामीले के भनेका छौँ भने अब माओको दीर्घकालीन जनयुद्ध अथवा लेनिनले प्रयोग गर्नुभएको सहरी विद्रोहबाट मात्रै क्रान्ति सम्पन्न हुँदैन । त्यस कुरालाई समाजले र विरोधीको नयाँ रणनीतिले पनि पछाडि छोडी सकेको छ । त्यसैले अब क्रान्ति सम्पन्न गर्न यो दुवैबाट माथि उठेको राजनीतिक कार्यदिशा र सैन्य रणनीति चाहिन्छ । त्यसैलाई हामीले एकीकृत जनक्रान्ति भनेका छौँ । क्रान्ति सम्भव छ तर पुरानै तरिकाले होइन, आजको आवश्यकता अनुरूप । क्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा उठाउने कुरा महत्वपूर्ण हो ।
यसमा अलिक स्पष्टता पनि छ र अस्पष्टता पनि छ । तपाईंले भनेको दुवै कुरा हो । अस्पष्टता यिनीहरूले लड्ने तरिका के हो भनेर होला । यिनले भनेको एकीकृत जनक्रान्ति ०५२ सालकै जस्तो गुराँसको पाखामा पुग्ने खालको हो कि भन्ने पनि मानिसहरूमा होला । अथवा यिनले सहरमै गड्याङगुडुङ गर्न खोजेका हुन् कि भन्ने पनि होला । तर यसका बाबजुद एउटा स्पटता पनि होला । मलाई लाग्छ हामीले संसदीय व्यवस्था अस्वीकार गर्छौँ भन्नेमा आजको पुँजीवादी व्यवस्था अस्वीकार गर्छौँ भन्ने कुरामा फेरि स्पष्टता नै होला ।
स्पष्ट छैनन् भन्नेमा पनि दुइटा कुरा छन् । एउटा साँच्चै अन्तत्र्रिmया, छलफलको अभावमा भने अर्काथरी मान्छे भनेको जानाजान थाहा नभएको पार्दैछन् । जब कि त्यो कुरा उनीहरूले बुझेका छन् । प्रचण्ड, बाबुरामलाई त्यो कुरा थाहा छैन भन्नुस त ? माकेका सबैजसो नेतालाई थाहा छ । कम्तिमा न्यूनतम कुरा थाहा छ । हामीसँगै लड्दै भिड्दै सहकार्य गर्दै आएको हुनाले उहाँहरूलाई थाहा छ । तर उहाँहरूले आफ्नो कमजोरीबाट एकछिन भएपनि आराम पाउन उनीहरू स्पष्ट छैनन् भन्नु हुन्छ । त्यो जानाजान गरेको कुरा हो । हामी नेपालको अधुरो क्रान्तिलाई पूर्णता दिन, नेपाली समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ । हामी नेपालको संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादको पूर्ण अन्त्य चाहन्छौँ र त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छौँ । बाँकी अन्य कुरा हामीले स्पष्ट गर्दै जाने हो ।
चन्दा त उठाउन परिहाल्यो । मलाई लाग्छ हामीले जति व्यवस्थित गरेका छौँ, त्यसमा कसैले केही भन्न सक्दैनन् । अर्को कुरा हामीले दुई वर्षमा जे गर्यौँ, मैले नै धेरै भन्ने कुरा भएन । तर राज्य धेरै तरङ्गित छ । कतिखेर के गरौँ भन्ने अन्तरद्वन्द्वमा राज्य छ । हरेक पटक हामीलाई नै मुख्य चुनौतीका रूपमा देखाइन्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनका बेलामा मात्र हाम्रा लगभग ८ सय साथीहरू गिरफ्तार पर्नुभएको छ । दुई जना सहिद हुनुभएको छ । तीनजना साथीहरूलाई गोली लागेको छ । हामीले केही नगरेको भए राज्यले यो किन गरेको त ? पार्टीले जनताको पक्षमा आन्दोलन नछेडेको भए राज्य किन यति धेरै पूर्वाग्रही र आक्रामक हुन्थ्यो ?
यो निर्वाचनलाई तपाईंहरू बहिष्कार गर्दै हुनुहुन्छ, यो बाहेक केही एक्सन समेत गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ, के यो साँचो हो ?
हो, हामीले निर्वाचनलाई खारेज गरेका छौँ । अघि तपाईंले सोध्नुभएको र यो कुरा गम्भीर छ । मलाई दुवै छ भन्ने लाग्छ । यदि हाम्रो पार्टीले चन्दा मात्रै उठाउँथ्यो भने यो हल्ला किन भयो होला ? त्यसैले त्यस्तो कुरा होइन । हामीले सीधा र स्पष्ट शब्दमा राज्यसँग लड्ने हो भनेका छौँ । यो कुरा हामीले बाहिरै भनेका छौँ र यो कुरा म यहाँ पनि भन्छु । यो राज्यलाई हामी मान्दैनौँ । यो जनविरोधी, प्रगतिविरोधी पुँजीवादी राज्य हो । पुँजीवादी पनि कस्तो भने दलाल पुँजीवादी राज्य । दिमागमा कमिसन खाने र भोगविलास गर्नेबाहेक केही छैन । त्यो कुरा व्यवहारमा सावित हुन्छ नि । त्यसैले हामी यसको विरुद्ध लड्छौँ । लड्दा घटनाक्रम कसरी जान्छ त्यो राज्यसँग सम्बन्धित कुरा हो । म के भन्दिन भने हामी अहिले नै ७५ जिल्ला नियन्त्रण गरिहाल्छौँ भन्दिन । तर के भन्छौँ भने राज्यलाई हामी एउटा उचाइमा सामना गर्छौँं ।
नेपालमा ००७ सालदेखि नै राजनीतिज्ञ राजनीतिक क्रान्ति गर्न सफल र कुशल तर जब राजनीतिक क्रान्ति राज्यमा स्थापित गर्ने सवाल हुन्छ, तब असफल देखिन्छन् अथवा भनौँ न त्यसको वैठानमा असफल देखिन्छन् । कुनै दिन तपाईंहरूले राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिनुभयो भने तपाईंहरू त्यसरी अगाडि बढ्नु हुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
डेमोक्रेसीको परिभाषा नै काङ्ग्रेससँग छैन् । चुनाव मात्र भन्छन् र चुनावमा पैसा खर्च गर्ने हो भन्छन् । पैसा खर्च गरेर जितेको मान्छे डेमोक्रेसीको माध्यमबाट आएको नेतृत्व हो ? दलालहरू, ठेकेदारहरू पुँजीपतिहरूले पैसा खर्च गरेको भरमा चुनाव जित्ने कुरा पनि कही डेमोक्रेसी हुन्छ ? काङ्ग्रेस त यति रद्दी थोत्रिएको पार्टी छ कि योसँग कुनै सोच नै छैन । विभिन्न विदेशीहरूले उचालेको भरमा चलिरहेको छ । यसको सापेक्षमा कम्युनिस्टहरूले एउटा दृष्टिकोण दिए तर तीनले पनि पूर्णता दिन सकेनन् । त्यसो त केपीजी, झलनाथजी, प्रचण्ड–बाबुरामजीले पनि न्यु डेमोक्रेसी र समाजवादको व्याख्या दिन सक्नुहुन्छ । व्याख्यासम्म यिनीहरूसँग एउटा धारणा छ तर यिनले पूर्णता दिन सकेनन् ।
क्रान्तिलाई पूर्णता नदिएकै कारण नेपाली समाज फेरि भूमरीमा परेको छ । अहिले जनता रणभुल्ल छन् । यो ठीक हो भन्दा त्यही ठिक लाग्ने । होइन त्यो गलत हो भन्दा गलत जस्तै लाग्ने । त्यसैले जनतालाई हामीले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । त्यसैले प्रचण्डजीले यो (राज्यसत्ता) कसरी चलाउन सक्नु हुन्छ ? उहाँले जति फुर्ति लगाए पनि सक्नु हुन्न । उहाँ डुब्ने नै हो । पहिले मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने प्रचण्ड भनेको नेपाली समाजको वास्तविक नेतृत्व हो । उहाँसँग छुट्टै नयाँ राज्यको अवधारणा छ । उहाँले नै सबैलाई आफूभित्र विलय गरेर जानु हुन्छ तर आज त उहाँ जनताको बहुदलीय जनवादको झोला भिरेर हिँडेको एमालेको झोलामा माओवाद लगेर हिँड्न थाल्नु भयो । यो त कस्तो भयो भने आफैले खनेको बाटोमा आफै हराए जस्तो भयो ।
केही बन्दैन, त्यो भ्रम हो । त्यो भनेको बेलुन जस्तो हो । हावा फुस्कन्छ अनि सकिन्छ । हेर्दै जानुस् न ।
त्यसलाई पुच्छरवाद भनिन्छ । आफ्नै विचारप्रति हदैसम्मको अविश्वास हो त्यो । लेनिनलाई त्यही भनिन्थ्यो । क्रान्ति जर्मन, फ्रान्स, ब्रिटेनमा गर्न छोडेर उता रुसतिर गर्न पाइन्छ । यो लेनिनको महत्वकांक्षा हो, तानाशाह हुने कुरा हो । यो कुरा एङ्गेल्सका हितैसी कार्ल काउत्सकीको भनाइ हो । तर लेनिनले अन्तरविरोधले जहाँ क्रान्तिको वातावरण बनाउँछ त्यसलाई पक्रने हो भन्नुभयो । पुँजीवादले नै स्वतः सामाजवाद जन्माइदेला र खाउँला भनेर बस्नेहरू किन कम्युनिस्ट हुनु पर्यो । त्यति त अमेरिकन डेमोक्र्याटले पनि भन्छन् । त्यसैले हामीले के भन्नु पर्छ भने नेपलामा पुँजीवाद आएको छैन ।
यो अन्तर भनेको समाजवादको देन हो । अहिले जेसुकै भए पनि उत्तरकोरियाको कुरा गर्नुस् न । नागरिकहरूमा गर्व हुनुपर्यो हाम्रो देश भनेर । नेपालमा यो व्यवस्थाबाट समाजवाद आउँछ भन्नेहरू दास हुन् । पुँजीवादका दास । त्यो भलै बुद्धिजीवी नै किन नहुन् ती दास मानसिकता भएका बुद्धिजीवी हुन् । यस्तो विचार फैलाउने कुराले के गर्छ भने हामीलाई पुँजीवादको पुच्छर बनाउँछ । यत्रो उत्पीडन गर्ने दलाल पुँजीवाद, यति अमानवीय दलाल पुँजीवाद, यति तानाशाही दलाल पुँजीवाद, यति विकृत र शोषणकारी दलाल पुँजीवादभित्र यो तर्क गर्न मिल्छ ? त्यसैले यो भनेको पुच्छरवाद हो ।
तर विश्वव्यापी रूपमा चल्ने मुक्ति आन्दोलनको हिसाबले हामी अन्तर्राष्ट्रियवादी हो । त्यसमा हामीलाई कुनै भ्रम छैन । देशमा जनतामाथि भएको समुदायको उत्पीडनसम्म आन्तरिक राष्ट्रवादी हो । तर त्यो राष्ट्रियताको हल चाहिँ समाजवादले गर्छ । त्यसर्थ हामी नेपालमा पनि हामी अन्तर्राष्ट्रियवादी हो । कुनै जाति विशेष, समूह विशेषमा तानिएर खुम्चिए त्यो अन्धराष्ट्रवाद हो । त्यसले मुक्ति दिँदैन । त्यसले विध्वंश ल्याउँछ । हाम्रो नेपालको मात्र कुरा गर्ने हो भने त्यो अन्धराष्ट्रवाद हो ।
(हामीले यो अन्तर्वार्ता रातोपाटीबाट लिएको हौं ।)
← बरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोरमाथि भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट दुब्यर्वहार
बालकृष्ण ढुङ्गेल पक्राउ, पक्राउसंगै रिहाईको माग →
जितगढी किल्ला बचाउ अभियानले गर्यो बुटवलमा बृहत भेला, अध्यक्षमा चुनिए नेपाली
१४ चैत्र २०७४, बुधबार १४:२५ Janabato Online Comments Off on जितगढी किल्ला बचाउ अभियानले गर्यो बुटवलमा बृहत भेला, अध्यक्षमा चुनिए नेपाली
तिहारमा प्रज्वलनशील पदार्थको ओसारपोसार नगर्न प्रमुख जिल्ला अघिकारी भसालको आग्रह
२० कार्तिक २०७५, मंगलवार ०१:०१ Janabato Online Comments Off on तिहारमा प्रज्वलनशील पदार्थको ओसारपोसार नगर्न प्रमुख जिल्ला अघिकारी भसालको आग्रह
३ मंसिर २०७४, आईतवार ०५:५४ Janabato Online Comments Off on प्रकाश दाहाललाई श्रद्धाञ्जली दिन नर्भिकमा नेता र शुभेच्छुकहरुको भीड (फोटोसहित)